Ka bixidda Ingiriiska Midowga Yurub iyo saamaynta Sweden | Faaqidaad
Ka bixidda Ingiriiska Midowga Yurub iyo saamaynta Sweden
FG: Maqaalkan looma turjuman karo aragtida Faaqidaad, wuxuu u gaaryahay qofka ku saxiixan.
Ka bixida dalka Ingiriiska ee Middowga Yurub waxaa uu saamayn Wayn ku yeelanaa dhammaan wadamada ku jira Middowga Yurub. Saamayntaas ayaa noqoneysa mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba. Dalka Sweden ayaa waxaa soo gaari doona dhibaatooyin dhaqaale iyo kuwo siyaasadeedba.
Dalka Sweden waa wadan yar oo dhaqaalihiisu ku xiran yahay waxyaalaha dibadda loo dhoofiyo, haddaba dalka Ingiriiska ayaa ah dalka afraad ee loo iibgeeyo waxyaalaha ay sweden soo saarto, waxaa yaraan doona ganacsigii xorta ahaa iyo isu-socodkii xorta ahaa ee ka dhexeeyey Sweden iyo dalka Ingiriiska maadaama uu ka baxay midowga yurub, hoos u dhacaas dhinaca ganacsiga ahi waxaa uu dhalin doonaa in shirkadaha sweden ay hoos u dhigaan wax soosaarkooda inta laga helaayo suuq kale oo si xor ah loogu iib geeyo.
Arrinkaasi waxaa uu dhalinayaa in shirkaduhu dhimaan shaqaalahooda maadaama ay yaraadeen dalabyadii ganacsi ee ka imaan jirey dalka Ingiriiska. Waxaa halkaas ka dhalan karta in dad badan oo maanta shaqo haystaa ay shaqadooda waayaan, taasoo keeni doonta hoos u dhac ku yimaada cashuurtii dadku bixin jireen, arrintaas oo saamayn kusii yeelan doonta waxsoosaarka guud ee dalka iyo dhaqaalaha. Gobolada galbeedka dalka sweden ayaa ka mid ah kuwa aad ugu xidhan dalka Ingiriiska.
Cabdirisaaq Maxamed Xuseen qoraha warbixintan.
Sidoo kale waxaa qaali noqon doona waxyaalaha laga keeno ama loo dhoofiyo dalka Ingiriiska oo ay jiri doonaan kharash dheeraad ah oo la saari doono badeecadaha iyo waxyaalaha la kala iibsanaayo.
Shirkadaha Sweden waxa ay ay buuxin doonaan waraaqo kala duwan oo ka iman doona noocyo kala duwan oo cashuuro ah aan hore u jirin markii dalka Ingiriisku yurub ka mid ahaa, guud ahaan ganacsiga xorta ah ee sida tooska ah uga dhexeeya wadamada middowga yurub iyo ingiriiska ayaa yaraan doona.
Shirkadaha Sweden ee ku sugan dalka Ingiriiska oo kor u dhaafaya ilaa kun shirkadood ayaa iyagana waxaa soo gaari doonta saamayn weyn, maxaa yeelay waa iney dalbadaan ogolaansho in ay dalkaas ku sii sugnaadaan oo ay ka ganacsadaan, waa in ay shaqaalahooda u dalbaan sharci joogitaan iyo waraaqo shaqo.
Suuqa lacagaha ayaa ka ka mid ah meelaha kale ee uu arrinkani saamayn doono, waxaa mustaqbalka dhow uu jah-wareer ku iman doonaa sarifka lacagaha, waxaa lacagaha wadamada yurub ku imaan doona hoos u dhac iyo kor u kac aan la xadidi karin.
Qiimaha lacagaha oo hoos u dhacaa waxaa uu saameeya dhaqaalaha iyo ganacsiga ka dhexeeya wadamada. Sidaas darteed ma aha arrin wanaagsan.
Siyaasada: Dalka Sweden iyo Ingiriiska ayaa ah kuwo aad isugu dhow oo meelo badan heshiis ku ahaa, labada wadan ayaa si wanaagsan isu kaashan jiray kolka laga doodaayo arrimaha muhiimka u ah Yurub ama la codaynaayo.
Hirgelinta ganacsiga xorta ah iyo fududeynta isu – socodka dadka ee Middowga Yurub ayaa ka mid ahaa Su’alaha ay Sweden iyo Ingiriisku aad isaga kaashan jireen. Dalka Ingiriiska oo ah dal codkiisu miisaan leeyahay ayaa caawin jirey sweden si ay saameyn buuxda u yeelato. Dalka sweden ayaa dareemaaya in garab la’aan ku imaan doonto, maadaama uu ingiriiska ka baxay middowga yurub. Sweden iyo Ingiriiska ayaa ka mid ahaa wadamada ku jira Middowga Yurub oo aan isticmaalin lacagta EURO-ga.
Sidaas darteed waa iskaashan jireen labada wadan kolka laga hadlaayo arrimaha ku saabsan lacagaha. Labada sano ee soo socda ma jiri doonaan wax wayn oo saamayn ah balse wakhtigaas ka dib waxaa ay noqon doontaa in sweden ay si iskeed ah heshiis ula gasho dalka Ingiriiska, tusaale ahaan arrimaha ganacsiga, shaqada iyo isu-socodka dadka iyo badeecadaha. Waxaa kaloo dhici doonta in middowga yurub uu si wadajir ah ula xaajoodo dalka Ingiriiska oo la wada gaaro heshiisyo siyaasadeed iyo kuwo ganacsi.
Calamada Sweden iyo Ingiriiska.
Ugu danbayn, inta laga gaaraayo wakhtigaas iyo heshiisyadaas cusub waxaa sii shaqayn doona heshiiskii hore iyo sharciyada u degan Midowga Yurub.
Like saar boga Faaqidaad ee Facebook.
Cabdirisaaq Maxamed Xuseen
Ka bixidda Ingiriiska Midowga Yurub iyo saamaynta Sweden added by Editor on 29. June 2016